Posted on फ्रेवुअरी 2, 2010 by nepalkuwait	तपाईं भर्खरै मात्रै दूतावास खोल्न कुबेत पुग्नुभएको छ, नेपाली कामदारको हितमा कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
यहाँजस्तो अव्यवस्थित र अनियन्त्रित किसिमले नेपाली कामदार कुनै पनि देशमा गएको जस्तो लाग्दैन । सरकारको नियम, कानुन नाघेर, मिचेर यहाँ दलालका पछि लागेर आउनेको संख्या धेरै छ । दूतावासबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुनेछ । यसको निमित्त नेपाल सरकारद्वारा कामदारलाई जागरुक बनाउनु आवश्यक छ । यहाँ के काम गर्ने, कति तलब पाउने, के के अरू सुविधा छन् भन्ने कुरामा कम चासो राख्ने र लहलहैमा घरबाट भागेर आउने पनि छन् । धेरैलाई एउटा काम भनेर झुक्याई अर्को काममा लगाइएको पनि छ । जब हाम्रो देशमा सरकारी संयन्त्र छ, सरकारद्वारा इजाजत लिएर बसेका म्यानपावर कम्पनी छन् भने किन दलालको पछि लागेर चोरी बाटोबाट आउने ? यसबारे सरकारले कामदारलाई सञ्चारमाध्यमद्वारा नेपालमा नै जानकारी दिनुपर्छ । मैले सुरुदेखि नै दूतावासले लागू गर्ने एउटा खाका तयार गरेको छु । जसअनुसार नेपाली कामदार ल्याउने कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले पहिले दूतावासलाई जानकारी दिने र सहमति लिने । नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने र त्यसपछि कामदार आउनासाथ कामदारका कागजातहरूको १-१ प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दूतावासले तोकिएको संस्थाबाट कामदारको बिमा गराउनुपर्नेछ । भारतबाट आउने कामदारको निमित्त पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि व्यक्तिगत र कम्पनीमार्फत आवेदन गर्ने बेग्लै ढाँचाको र्फम हुनेछ । एजेन्सीले व्यक्ति अर्थात् स्पोन्सरको तर्फबाट ल्याउन चाहेको हो भने उसले दुवै विवरण पेस गनुपर्नेछ । सुरुमा केही कठिनाइ र झन्झट परे पनि यसले कामदारको विषयमा जानकारी राख्न मद्दत गर्नेछ । कुनै पनि बेला केही समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न अथवा उद्धार गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसमा मद्दत पुग्नेछ ।
नेपाली कामदारको समस्या कस्तो देखिरहनुभएको छ ? यहाँको समस्या राम्रोसँग बुझेको छैन । दूतावास पनि खुलिसकेको छैन, केही स्थानीय प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । तर समग्र रूपमा नेपाली कामदारप्रति यहाँ राम्रो धारणा छ । तैपनि यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदाय भेट गर्दा, कुरा सुन्दा समस्या निकै ठूलोजस्तो लाग्छ । यी समस्या सजिलै हल गर्न सम्भव छैन । यहाँको कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । यसो हेर्दा खासगरी श्रमसम्बन्धी कानुनी परिधिबाहिरका घरेलु कामदारका समस्या बढी विकराल देखिन्छन् । काम गर्ने घरबाट भाग्ने भगाउने क्रम यहाँ निरन्तर रहेछ । यहाँको सरकारलाई पनि यसबारे ज्ञान छ । त्यसरी भागी गैरकानुनी भएर बस्नेलाई समयसमयमा आममाफी हुने रहेछ । यो वर्ष अहिलेसम्म त्यस्तो भएको
कुबेत घरेलु महिला कामदारका समस्या बढी देखिने मुलुक हो, हाल महिला कामदारलाई कस्ता समस्या बढी देखिन्छन् ? घरेलु महिला कामदारको समस्या ठूलो छ । कसैसँग पूरा कागजात हुन्नन् । नगण्य कामदार मात्रै नेपालबाट सरकारी स्वीकृति लिएर आएका छन् । घरेलु कामदारहरू कति छन्, कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् जान्ने संयन्त्र छैन । उनीहरू श्रम कानुनअन्तर्गत पर्दैनन् । मलाई भगाएर लग्यो, बलात्कार गर्‍यो, पेट बोकायो भन्ने पनि छन् । यदि सरकारसँग स्वीकृति लिएर आएको भए यहाँ कुन एजेन्टले ल्याएको भन्ने रेकर्ड हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन । यस किसिमको अवस्थामा आममाफी कुरेर अवैध रूपमा बसेकालाई फर्काउन प्रयास गर्ने अथवा कागजातसहित आउनेलाई यहाँको सरकारी निकाय गुहारेर फिर्ता पठाउने कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेबाहेक अरू उपाय छैन । केही कामदार बिनाकारण पनि भाग्छन् भन्ने सुनेको छु । एकजना इरानी मूलकी एकल महिलाले राखेको नेपाली महिला तीन दिनपछि केही पनि नभनी भागेकी कुरा गर्थिन् ।
धेरै महिलाका बच्चा र गर्भवती भएको खबर पनि सुनिन्छ नि ? दूतावासले के गर्ने ? यो आफैं जे पनि गर्न सक्ने निकाय होइन । तर नेपाल सरकारको निर्देशन र कुवेती सरकारको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी केही मद्दत गर्न सकिएला । यस्ता महिलाले र्फकन इच्छा गरे भने आफूलाई पहिले प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्छ, त्यसपछि दूतावाससँग त्यो निकायले कागजात तयार गर्न अनुरोध गर्छ । यस्तो प्रक्रिया छ यहाँ । दूतावास खुलेपछि त्यस प्रकारको समस्याबारे जानकारी लिई नेपाल र कुवेत सरकार दुवैलाई जानकारी दिइनेछ र समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रयास गरिनेछ ।
कुवेती अधिकारीहरूले अव्यवस्थित रूपमा कामदार पठाइरहेमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका सन्दर्भमा के सोच्नुभएको छ ? कुनै चेतावनी दिएको छैन । उनीहरूको भनाइ हाम्रो देशबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पठाउनुपर्ने भन्ने मात्र हो । बेलाबेलामा फोटो फेरिएका, केटीको नाम अगाडि मि. लेखिएका, उमेर सच्याइएका र अरू धेरै किसिमका अनियमितता भएको देख्दा उनीहरू आश्चर्य मान्छन् । कसैलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिने पनि गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा हामीलाई गाह्रो पर्ला । हाम्रो हेलचक्र्याइँ र अव्यवस्था बढ्दै गएको यस अवस्थामा रोक नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
Filed under: समचार « घाइतेले पनि दिलाइन् कांस्य एसियालीस्तरको फुटबलमा नेपालको यात्रा टुंगियो »